संघको आफ्नै भवन निर्माण गरेर छाड्छु | नेपाली पब्लिक संघको आफ्नै भवन निर्माण गरेर छाड्छु | नेपाली पब्लिक
होमपेज / अन्तरवार्ता | अर्थ | कर्पोरेट | प्रदेश १ |
संघको आफ्नै भवन निर्माण गरेर छाड्छु
किशोर विश्वकर्मा २०७६, ५ असार बिहीबार १८:५७
करिब आठ वर्षअघि विराट व्यापार संघको साधारण सदस्यता लिएका सुजन थापा अहिले सोही संघको नेतत्वमा रहेका छन्। साधारण सदस्य हुँदै महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उनी भर्खरै सम्पन्न साधारणसभाबाट अध्यक्षमा सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्षमा चयन भएका हुन्। विराट व्यापार संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि अहिले उनी संघको आफ्नै भवन बनाउने अभियानमा जुटेका छन्। उनी सदस्यता वृद्धि र नवीकरण नभएका सदस्यहरूको नवीकरण गराएर संघलाई व्यवस्थित बनाउन लागिपरेका छन्। यस अघि महासचिव रहेका उनी अध्यक्ष भएयता अझ पूर्वका व्यवसायीहरूका समस्या समाधानमा अग्रसरता देखाएका छन्। प्रस्तुत छ, यसै सेरोफेरोमा थापासँग नेपाली पब्लिकका लागि किशोर विश्वकर्माले गरेको कुराकानी।
विराट व्यापार संघलाई कसरी हाँक्नुहुन्छ ?
– म विराट व्यापार संघमा साधारण सदस्य हुँदै अध्यक्षसम्मको जिम्मेवारीमा आइपुगेको छु। म सधैँ व्यवसायीका हितमा जुनसुकै समयमा पनि लागिपरेको हुनाले सबैले मलाई विश्वास गरेर सर्वसम्मत नेतृत्वमा चयन गर्नुभएको हो। साँच्चै भन्नुपर्दा अहिले नै अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आउन मलाई इच्छा थिएन तर सबै अग्रज तथा साथीभाइहरूले नेतृत्वमा बस्न सल्लाह सुझाव दिनुभएकाले नै मैले नेतृत्व सम्हालेको हो। ममाथि उहाँहरूले जुन विश्वास र माया देखाउनुभएको छ, म त्यसका लागि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको त्यो विश्वासलाई कायम राख्दै व्यवसायीका हितमा सबै निकायसँग समन्वय गरी रात दिन केही नभनी खट्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाउन चाहन्छु। अब संघलाई म सदस्यता नवीकरणको अभियान चलाएर अघि बढाउँछु। नयाँ सदस्यहरूसमेत वृद्धि गराउनेतिर मेरो ध्यान जानेछ। २०औँ वर्षदेखि यो संघ भाडामै बस्दै आएको छ।
झट्ट हेर्दा वा सुन्दा विराटनगरमा मात्र सीमित छ कि भन्ने देखिनु स्वाभाविक नै हो। तर, वास्तवमा हामी विराटनगरमा मात्र नभएर पूरै मोरङ जिल्लाभर हाम्रो उपस्थिति छ। हाम्रो यो केन्द्रीय संघ भएकाले मोरङबाहेक सुनसरी र झापामा पनि हाम्रा शाखाहरू रहेका छन्।
सबैको कार्यकालमा संघको आफ्नै भवन बनाउने भाषण मात्र भयो। तर, म मेरो कार्यकालभित्रै संघको आफ्नै भवन बनाएरै छाड्ने अठोटका साथ लागि परेको छु। व्यापारीको हितका लागि जुनसुकै समयमा पनि म अग्रसर हुनेछु। प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, उद्योग संगठन, मोरङ व्यापार संघलगायतका निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नेछु। मेरो टिममा अन्य विभिन्न विषयगत संस्थाको कुशल नेतृत्व गरिसक्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अनुभवले समेत मलाई काम गर्न सहज हुने आशा लिएको छु। समग्रमा अहिलेसम्म विराट व्यापार संघ जुन अवस्थामा छ, अबको १ वर्षभित्रै यस संघलाई म धेरै माथि लाने प्रयत्नमा छु।
हाल विराट व्यापार संघमा कति व्यवसायीहरू सदस्य रहेका छन् ?
– विराट व्यापार संघमा साना पानपसलेदेखि ठूला उद्योगी व्यवसायीहरू अटाउनुभएको छ। सबैलाई समेटेर एकतावद्ध गरेर अघि बढ्ने संस्था अरु छैनन्। ‘व्यापारिक एकता आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ स्थापना भएको यस संस्थामा सबै खाले व्यापारीहरू अटाउनुभएको छ। विभिन्न विषयगत क्षेत्रका व्यवसायीहरू, जस्तै फर्निचर, साना घरेलु उद्योगीहरू, वितरकहरूलगायत अन्य क्षेत्रका व्यवसायीहरूका समस्या समाधानका लागि स्थापित संस्था हो। हाम्रो यस संस्थामा हालसम्म २ हजार ४ सयभन्दा बढी सदस्यहरू हुनुहुन्छ। केही व्यवसायीहरूले सदस्यता नवीकरण गराउनुभएको छैन। हामीले अहिले सदस्यता नवीकरण अभियानलाई तीव्र बनाएका छौँ।
यस संस्थाले व्यवसायीहरूका हितमा गर्दै आएका कार्यहरू के–के हुन् ?
– विराट व्यापार संघको नामअनुसार नै हामीले व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षण, सम्वर्द्धन गर्ने, व्यवसायीका समस्याहरू पत्ता लगाएर समाधान गर्ने, व्यवसायीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन र उनीहरूका समस्याहरू केलाउनका लागि विभिन्न सम्मेलनहरूको आयोजना गर्ने, सदस्यता वृद्धि तथा नवीकरण गर्ने, अन्य संघ संस्था, उद्योग संगठन, मोरङ व्यापार संघलगायका संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने, विभिन्न व्यापारिक मेलाहरूको आयोजनाहरू गर्ने, सरकारी निकायहरू राजस्व कार्यालय, भन्सार कार्यालयलगायतका निकायहरूसँग अन्तर्क्रियाहरू गर्नेलगायतका कार्यहरू हामीले निरन्तर रूपमा गरिनै रहेका छौँ।
तपाईंको नेतृत्वमा यतिबेला के हुँदै छ ?
– मेरो नेतृत्वमा विभिन्न व्यावसायिक सम्मेलनहरू आयोजन गर्ने योजना छ। हाम्रो संघमा विभिन्न विषयगत समितिहरू पनि छन्, सबैसँग समन्वय गरेर एकतावद्ध भएर समस्याहरूको पहिचान गरेर समाधान गर्ने काममा हामी लागिपरेका छौँ। विभिन्न संघहरू जस्तै, औषधि व्यवसायी संघ, सुनचाँदी व्यवसायी संघ, इलेक्ट्रोनिक्स संघलगायत सबै विषयगत क्षेत्रगत संघसंस्थाहरूलाई समेटेर उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर समस्याहरूको समाधान गर्ने योजना बनाएका छौँ। व्यावसायिक जुन क्षेत्रको समस्या हो, त्यही क्षेत्रसँग समन्वय गरेर समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। अब सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एकै थलोबाट समस्याहरू समाधान हुने गरी बृहत रूपमा व्यवसायीहरूलाई एकत्रित गरेर अन्तक्र्रियाका माध्यमबाट विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुखहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विराटनगर महानगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, भन्सार, आन्तरिक राजस्व कार्यालय सबैको उपस्थितिमा बृहत् सम्मेलन गराएर समस्याहरू सम्बोधन हुनेगरी काम गर्नेछौँ।
तपाईंहरूका समस्या केके छन् ?
– हामीले तीनै तहको कर तिर्नुपरिरहेको छ। यसबाट हामी मारमा परिरहेका छौँ। सरकारले उपभोक्तालाई जोगवनी वा भारतीय बजार जान रोक्ने खालका नीति बनाउनुपर्छ। घर वहाल कर पनि समस्याकै विषय हो। स्वदेशी उद्योग व्यवसाय अहिले संकटग्रस्त अवस्थामा छन्। अघोषित लोडसेडिङ र सरकारको झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण मारमा छौँ। आशा छ, यो सरकारले हाम्रो समस्या बुझेर समाधान गरिदिनेछ।
सरकारले तपाईंहरूका लागि के गरिदिनुपर्छ ?
– मूलतः ऐन कानूनहरू व्यवसायीमैत्री हुनुपर्दछ। उद्योगी व्यवसायीलाई निकै असर गर्ने नीति नियम बनाउनु भएन। सरकाले अघोषित लोडसेडिङ बन्द गराउनुपर्छ। करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ। स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। अहिलेको दुई तिहाइको यो सरका्ले चाहने हो भने सबै थोक गर्न सक्छ। तसर्थ, यो सरकाले हाम्रा मागहरू पनि सम्बोधन गरोस्।
विराट व्यापार संघ विराटनगरमा मात्र सीमित छ कि ?
– झट्ट हेर्दा वा सुन्दा विराटनगरमा मात्र सीमित छ कि भन्ने देखिनु स्वाभाविक नै हो। तर, वास्तवमा हामी विराटनगरमा मात्र नभएर पूरै मोरङ जिल्लाभर हाम्रो उपस्थिति छ। हाम्रो यो केन्द्रीय संघ भएकाले मोरङबाहेक सुनसरी र झापामा पनि हाम्रा शाखाहरू रहेका छन्। ती शाखाले हामीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छन्। व्यवसायीको हक हित तथा समस्या समाधानमा हामीले पनि निरन्तर अग्रसरता देखाउँदै आइनै रहेका छौँ।
विराट व्यापार संघकै अगुवाइ तथा पहलमा विराटनगरका विभिन्न पसलहरूमा अनिवार्य रूपमा मूल्यसुचीको बोर्ड राखिएको थियो, तर अहिले त्यो देखिँदैन। अर्को कुरा राखिए पनि अपडेट गरिएको पाइँदैन, यो किन यस्तो भएको ?
– हामीले विगतका दिनहरूमा पनि मूल्यसूची राख्न लगाएका थियौँ। हामीले अहिले पनि मूल्यसूची राख्न र अपडेट गर्न अनिवार्य गरेका छौँ। साथै, आगामी दिनहरूमा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर अनुगमन गरेर अनिर्वा रूपमा मूल्यसूची राख्न लगाउनेछौँ। त्यसैगरी, बजार अनुगमन गरी उत्पादित मिति र एक्सपाइरी मिति पनि रहे नरहेको हेरेर उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु मात्र उपलब्ध गराउने कामको अगुवाइसमेत गर्ने काम हामी गर्नेर्छौं।
नेपालतर्फचाहिँ जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माण गर्नका लागि जग्गा हस्तान्तरणमै ढिलाइ भएका कारण सँगै निर्माण हुन नसकेको हो। अहिले लगभग निर्माण सम्पन्न हुन लागेको छ।
अहिले भारततर्फ एकीकृत जाँचपास चौकी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। नेपालतर्फ पनि बन्ने क्रम अन्तिम चरणमा छ। यो बनिसकेपछि तपाईंहरूलाई कस्तो सहजता होला ?
– महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो, एकीकृत जाँचपास चौकी भारततर्फ पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ। झण्डै १ वर्षअघि नै भारतीय उच्च अधिकारीहरू तथा कर्मचारीहरू एवम् नेपालका तर्फबाट उद्योग संगठन मोरङका तत्कालीन अध्यक्ष मुकेश उपाध्याय र व्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडा तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा उद्घाटन नै भइसकेको अवस्था छ। नेपालतर्फचाहिँ जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माण गर्नका लागि जग्गा हस्तान्तरणमै ढिलाइ भएका कारण सँगै निर्माण हुन नसकेको हो। अहिले लगभग निर्माण सम्पन्न हुन लागेको छ। यो सञ्चालनमा आएपछि अहिले जोगवनीमा हुने अत्यधिक जामको अन्त्य हुनेछ।
धेरै समयसम्म मालवाहक सवारीसाधनहरू रोकिएर बस्ने हुनाले लागतसमेत बढ्ने गरेको थियो। ढिलो पनि हुन्थ्यो तर आईसीपी बनेर सञ्चालनमा आएपछि हामीलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ। बुधनगरसम्म त बनिसकेको छ। तर, रेल ल्याउने छाँटकाँट छैन। हामीले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आयात गरेका सामानहरू रेलबाट सीधै आईसीपी चेक पोष्टमा आइपुग्छ र त्यहाँ चेकजाँचपछि सीधै कटहरीसम्मै सामान आइपुग्छ। जसका कारण हामीले पहिले ठूलो लागत ब्यहोर्नुपरेको थियो भने अब लागत कम हुनुका साथै आयात गरेका सामानहरू पनि सहज रूपमा नेपाल आइपुग्छ। यसले विराटगरको मात्र नभएर राष्ट्रकै विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। स्वदेशी उत्पादन निर्यातमा पनि निकै सहज हुनेछ।
अन्त्यमा, सरोकारवाला पक्षहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
– व्यवसायीहरूले विराटनगरलाई सफा राख्नका लागि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जथाभावी फोहोर नफाल्न र सफा राख्न अनुरोध गर्दछु। व्यावसायिक क्षेत्रका समस्याहरू समाधानका लागि सबै पक्षले सहयोग र समन्वय गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु।